It is said that for money you can have everything, but cannot. You can buy food, but not appetite; medicine, but not health; knowledge, but not wisdom; glitter, but not beauty; fun, but not joy; acquaintances, but not friends; servants, but not faithfulness; leisure, but not peace. You can have the husk of everything for money, but not the kernel.
Posted by ညိမ်းညို at 19:02
yes ...Money is not doing between fridenship...
so good ...:)
ညိမ်းညိုလဲ ဒသနတွေ တင်လို့ပါလား။ ခနပဲ အခြားဘလော့ဂ်မှာ ဒီလိမျိုးဆန်ဆန် တင်ထားတာ တွေ့လိုက်သေးတယ်။ :)
28 February 2008 at 04:58
ပိုက်ဆံရှိရင် အရာရာ ရနိုင်တယ်လို့ပြောကြတယ် ဒါပေမယ့် မရနိုင်ပါဘူး
မင်းအစားစာတွေကို ၀ယ်နိုင်ပါတယ် ဒါပေမယ့် အရသာရှိမှာ မဟုတ်ဘူး ။ ဆေးတွေ ၀ယ်တယ် ကျန်းမာခြင်းမရနိုင်ဘူး။ အသိပညာတွေဝယ်တယ် ဒါပေမယ့် ပညာရှိတော့ ဖြစ်မလာနိုင်ဘူး။
ပြိုးပြက်လင်းလက်တာတွေကို ရနိုင်မယ် ဒါပေမယ့် လှပမှာမဟုတ်ဘူး
ပျော်စရာတွေကို ၀ယ်နိုင်မယ် ဒါပေမယ့် ချမ်းမြေ့မှုကိုရမှာ မဟုတ်ဘူး
ရင်းနှီးသိကျွမ်းမှုတွေရှိလာမယ် ဒါပေမယ့် သူငယ်ချင်းကိုတော့ မရနိုင်ဘူး။ အစေခံတွေကို ၀ယ်နိုင်မယ် ဒါပေမယ့် သစ္စာရှိမှုကိုတော့ ရမှာမဟုတ်ဘူး။ လွတ်လပ်ခြင်းတွေကို ၀ယ်ယူနိုင်မယ် ဒါပေမယ့် ငြိမ်းချမ်းခြင်းကိုတော့ မရနို
ရင်းနှီးသိကျွမ်းမှုတွေရှိလာမယ် ဒါပေမယ့် သူငယ်ချင်းကိုတော့ မရနိုင်ဘူး။ အစေခံတွေကို ၀ယ်နိုင်မယ် ဒါပေမယ့် သစ္စာရှိမှုကိုတော့ ရမှာမဟုတ်ဘူး။ လွတ်လပ်ခြင်းတွေကို ၀ယ်ယူနိုင်မယ် ဒါပေမယ့် ငြိမ်းချမ်းခြင်းကိုတော့ မရနိုင်ဘူး
မင်းဟာ ပိုက်ဆံနဲ့ အကာ ၊ အခွံတွေကိုတော့ ရနိုင်ပါတယ် ဒါပေမယ့် အနှစ်သာရကိုတော့ မရနိုင်ဘူး။
nice note.. :)
28 February 2008 at 06:11
type တာမဟုတ်တော့စာတွေထပ်ကုန်တယ်..sorry နော်ကို..ညိမ်းညို... :P
money = ပိုက်ဆံ
ကျနော့် ခလေး နို့ ဖိုးပိုက်ဆံရှာရတယ်
အဖေ နဲ့ အမေအတွက်ပိုက်ဆံရှာရမယ်...
အသဲနဲ့မင်္ဂလာဆောင်ဖို့ ပိုက်ဆံရှာရတယ်...
ဟားဟား ဘာမှလဲမဆိုင်ဘူးး ဦးကြွက်ကြီးကို နောက်နေတာ....
ခ ချင်တာ ခ
ကွိကွိ ( ကြောင်အော်သံအသစ် )